yarzartun: November 2015
​ဆော့ဖ်​ဝဲ​လေးက​တော့ ဂစ်​တာကြိုးကို အလွယ်​ကူဆုံး အသံညှိ​ပေးနိုင်​တဲ့ ​ဆော့ဖ်​ဝဲပဲ ဖြစ်​ပါတယ်​။ ၆ ကြိုး ​ဟော်​လို ဂစ်​တာတစ်​လက်​မှာ ကျွန်​​တော်​တို့ တစ်​ကြိုးချင်းအလွတ် တီးတဲ့အခါ အ​ပေါ်ဆုံး bass ကြိုးကြီးက​နေ ​အောက်​ကိုရေတွက်​ပါတယ်​။ အက္ခရာစဉ်​အားဖြင့်ကြိုးကြီးက E ပါ ပြီးရင်​​အောက်​ကို ဆက်​​ရေသွားမယ်​၊ A, D, G, B, E နဲ့ ပြန်​ဆုံးပါတယ်​။ Guitar tuner ​ဆော့ဖ်​ဝဲကို ဖုန်းထဲမှာ ဖွင့်ထားမယ်​ ပြီးရင်​ ​အောက်​ဆုံးက E ကြိုးကို အလွတ်​ တီးကြည့်ပါ။ ဖုန်းထဲမှာ ကိုယ်​တီးလိုက်​တဲ့ကြိုးကို ​ဖော်​ပြ​နေပြီး ကြိုးအ​လျော့ အတင်းကို အလယ်​မှာ0ထားပြီး + and – sign နဲ့ပြထားပါတယ်​။ tunning knob ကို ညှိယူပါ။ key မှန်​ပြီဆိုလျှင်​ မိမိညှိ​နေ​သောကြိုး၏ဥပမာEဆိုလျှင်အစိမ်းရောင်​​ပြောင်းသွားပါမယ်​။ အဲဒါဆို ရပါပြီ။ အခြားကြိုး​တွေကိုလည်း ထိုနည်း၎င်းညှိယူသွားရုံပါပဲ။
Posted by dawallay lay at 7:24:00 PM No comments:
Transformer Myanmar Smart Zawgyi Font
Transformer Myanmar Smart Zawgyi Font.ttf ဒီဖောင့်ကိုဖောင့်သွင်းရခက်ခဲတဲ့ Lenovoဖုန်းတွေမှာပါအလုပ်လုပ်
Androidဖုန်းတွေကတော့ ifont apk အသုံးပြုပြီးfontချိန်းနိုင်ပါတယ်။
Samsung တွေအတွက်ကတော့ Font styleကနေချိန်းနိုင်ပါတယ်။
Transformers myanmar smart zawgyi font
Posted by dawallay lay at 4:00:00 PM No comments:
Digital Music Mentor(for pc)
-setup ဖိုင်ကိုသွင်းပြီးလျှင် program ကို မဖွင့်ပဲ ပိတ်ထားလိုက်ပါ။ ပြီးလျှင်Crack ဖိုင်ကို ဖွင့်ပြီး C:\_Program Files\_Sienzo\_DMM လမ်းကြောင်းကိုရွေးပြီး ဖြေ/သွင်းပေးလိုက်ပါ။အောက်ကလင့်မှာဒေါင်းနိုင်ပါတယ်။
Posted by dawallay lay at 3:50:00 PM No comments:
Cooler Master v2.0
ပူလာပြီးoverheatဖြစ်လာတတ်ပါတယ်​။အဲ့လိုtemperatureကိုချိန်​ညှိ​ လျော့ကျစေပြီးoverheatingဖြစ်နေတဲ့ကိုယ့်ဖုန်းထဲကapplicationတွေကိုkillလုပ် ​​ပေးမယ့်"Cooler Master v2.0"ဆိုတဲ့3စ်​ခုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဖုန်ပူလို့သုံးရအဆင်​မ​ပြေဖြစ်​​ နေသူများအတွက်​ ဒီapkလေးကိုinstallလုပ်ထားပြီးoverheatဖြစ်နေတဲ့appတွေကိုkillလုပ်ပေးကာမိမိဖုန်းကိုအပူချိန် ​​လျော့ကျ​စေနိုင်​ပါတယ်​။
Apk file size 1.8MB ရှိပြီး
Posted by dawallay lay at 8:12:00 PM No comments:
Samsung Galaxy Ace Models all Firmware များနဲ့တင်နည်း
Android Firmwares Android Tutorial Firmware တင်နည်းများ Samsung Samsung Ace Firmware
Galaxy Ace ဖုန်းအတွက် ရှာရခက်လာတဲ့ all models firmware များကို
အလိုရှိတဲ့အခါ ဒေါင်းလော့ရယူနိုင်အောင် စုစည်းပြီးတင်ပေးလိုက်ပါ။
Sammobile နဲ့အခြားသော Web တွေမှာ အကောက်တစ်ခု Register လုပ်ပြီးမှ
ဒီဖုန်းအတွက် GT-S5830i, GT-S5839i, GT-S5830 ဆိုပြီး သုံးမျိုးပဲ ရှိပါတယ်။
Android Version ကတော့ 2.3.6 ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Galaxy Ace Models all Firmware
Galaxy Ace GT-S5830i Gingerbread 2.3.6 Firmware
Galaxy Ace GT-S5839i Gingerbread 2.3.6 Firmware
Galaxy Ace GT-S5830 Gingerbread 2.3.5 Firmware
How to Install Official Firmware
ပါဝါပြန်တက်လာပြီဆိုရင်တော့ ဖုန်း Official Stock Rom လေးကိုတွေ့မြင်ရပါပြီ။
Posted by dawallay lay at 7:57:00 PM No comments:
Posted by dawallay lay at 7:55:00 PM No comments:
iOS7(iOS 7.0 to iOS 7.0.5) များကို Untethered Jailbreak ပြုလုပ်နိုင်မည့် evasi0n1.0.5 Win & Mac(Resume Link)
IOS iOS ဆိုင်ရာများ JAIBREAK TOOLS
iOS7(iOS 7.0 to iOS 7.0.5) များကို Jailbreak ပြုလုပ်နိုင်မည့် evasi0n1.0.5 tool ကို update ထုတ်ပေးလိုက်ပြန်ပါပြီ. IOS 7.0.5 ရောက်နေသော IOS User တွေ (သို.) IOS 7.0.5 တင်ပြီးကလိ ချင်သောဘော်ဒါတို.အတွက် သတင်းကောင်းလေးပါ Jailbreak လုပ်နည်းကတော့အားလုံးသိကြမယ်ထင်ပါတယ်.....
(1) evasi0n7-win and Mac 1.0.5-Jailbreak For IOS 7- Download Here
Posted by dawallay lay at 7:48:00 PM No comments:
မိမိ ဓါက်ပုံတွေကို အရည်အသွေးကောင်းမွန်စွာ ပြုပြင်ဖန်တီးနိုင်တဲ့ Handy Photo for iPhone and iPad
Phone/ iPad ကိုင်ဆောင်ကာ Handy Photo အသုံးပြုသူလိုများအတွက် Update ဗါးရှင်း ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မိမိ ဓါက်ပုံတွေ Editing အရည်အသွေးကောင်းမွန်စွာ လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ ဆော့ဝဲလ် လေးဖြစ်ပါတယ်။ မိမိဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိ ရင် ရှိသလောက် လှပတဲ့ image editing ကောင်းကောင်းလေးတစ်ခုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ်လေးကတော့ 53 MB ဖြစ်ပြီး iPhone5/ iPhone 5s / iPhone 5c / iPad3/ iPad4/ iPad Air အားလုံးမှာသုံးနိုင်ပါတယ်။အသုံးပြုလိုတဲ့ မိတ်ဆွေ များဒေါင်းယူနိုင်ပါပြီ...။
Posted by dawallay lay at 7:41:00 PM No comments:
iPhone/ iPad ကိုင်ဆောင်ကာ Printer Pro v5.4.5 အသုံးပြုလိုသူများအတွက် Update တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ FineScanner PRO လေးကတော့ စာ၇ွက်စာတန်းတွေ ၊ ဓာတ်ပုံတွေ ၊ Email တွေကို Scan ဖတ်ပြီး JPG , PDF စတဲ့ ဖိုင်တွေနဲ့ သိမ်းထားလို့ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Scanner သုံးစရာမလိုပဲ..ဖုန်းကိုအသုံးပြုပြီး အရည်အသွေး အကောင်းမွန်ဆုံးဖြစ်အောင် Scan ဖတ်ပေးတဲ့ App လေး ပဲဖြစ်ပါတယ်..။ ရုပ်ထွက် Quality ကိုလည်း ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အနေအထားဖြစ်အောင် ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်..။ Scan ဖတ်ပြီးသား ပုံတွေကိုလည်း ‘ဒီ App ထဲက Document ထဲမှာပြန်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြုလိုတဲ့ မိတ်ဆွေ များ ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲ နိုင်ပါပြီ။
Posted by dawallay lay at 7:40:00 PM No comments:
iOS7 Widgets HD v: 14 Apk (All Android) 8Mb
iOS7 Widgets App ထဲမှာတော့ wifi, data, brightness, volume , bluetooth, gps, screen rotation
နှင့် home screen ကအစ iOS7 Style တွေပါပဲ။နောက်ထက် Clock Widget ,Battery Widget တွေ
အပြင် Weather Widgets တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 8 Mb ပဲရှိပါတယ်။Android : 2.3.3
iOS7 Widgets isaperfect addition to the plethora of iOS7 launcher themes on Google Play!
Make your phone look like an iPhone without losing your home screen widgets!
Awesome iOS7 Widgets includes:
+ iOS7 Style Toggles – Toggle your phone’s wifi, data, brightness, volume , bluetooth, gps, screen rotation settings as well as flashlight right from your home screen.
+ iOS7 Style Battery Widget – Shows your battery percentage and status.
+ iOS7 Style Clock Widget – Tells you what time it is and launches your alarm clock upon tapping it.
+ iOS7 Style Weather Widgets – Showsa5-day weather forecast for your location or any place you might think of!
+ Weather And Battery Level Notifications – Shows the current temperature or battery level (or both!) right in your task bar.
+ Even More Widgets – iOS7 Widgets come in different sizes and configurations to make your phone iOS7 awesome!
AW iOS7 Widgets is an all-in-one package and not justaskin, you don’t need to download anything else to enjoy this theme. It’s also compatible with all stock or third-party launchers such as Apex, Nova, Go Launcher, etc.
Posted by dawallay lay at 7:37:00 PM No comments:
IOS JAIBREAK TOOLS
iOS 7.1 မှ 7.1.1 အထိ jailbreak လုပ်နိုင်မည့် Untethered Jailbreak Tool ထွက်ရှိ ပြီဖြစ်ပါတယ် Pangu လို့ခေါ်တဲ့ တရုတ် iOS Hacker Team ကနေ တရားဝင် ထုတ်ပေးလိုက်တာပါ။
Pangu Jailbreak Tool နဲ့ iOS 7.1.1 Jailbreak ပြု လုပ်နိုင်မယ့် iOS Device တွေကတော့..
Pangu Jailbreak Tool ကို အောက်က link ကနေ ရယူနိုင်ပါတယ်။
1.acomputer running Windows (at least Windows XP) computer
2. ITunes (latest version) is installed
3. Use the USB cable to connect the Apple device to the computer
Note: Although Pangu jailbreak on most models are tested successfully, or please back up your data before jailbreak to avoid data loss.
Posted by dawallay lay at 7:31:00 PM No comments:
IOS iOS Tutorial Myanmar fonts
iOS 7.1.1 ကို Jailbreak ပြုလုပ်ချင်ကြတဲ့ iOS Users တွေအတွက် iOS 7.1.1 ကို Untethered Jailbreak လုပ်နည်းကို တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။ iOS 7.1.1 Jailbreak လုပ်လို့ရမယ့် iDevices တွေ ကတော့...
Download ရယူပြီးပြီ ဆိုရင်တော့ Pangu ဆော့ဝဲကိုဖွင့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် Jailbreak လုပ်မယ့် iPhone/ Pad နဲ့ ကွန်ပျူတာကို ချိတ်ဆက်ပါ။ ပြီးရင် pangu ဆော့ဝဲက ခလုတ်အမဲလေး ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
ကွန်ပျူတာက Pango ဆော့ဝဲမှာ Jailbreak Process စတင်နေပါလိမ့်မယ်။
ပြီးရင် ပန်းသီး Logo ပြန်တက်လာပါမယ်။ ပြီးရင် Lock Screen ကိုပြန်ဖွင့်ပြီး Home Screen ကိုပဲပြန် သွားလိုက်ပါ။
ဂုဏ်ယူပါတယ်။ သင့်ရဲ့ iOS 7.1.1 တင်ထားတဲ့ iDevices လေးကို အောင်မြင်စွာ Jailbreak လုပ်ပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်။
Posted by dawallay lay at 7:30:00 PM No comments: